Iimveliso zokuCoca zangaphakathi zeemoto -Ndalo yonke icocekile ngeenjongo
Ikhaya / iimveliso / Imveliso yokuCoca kweNdlu yangaphakathi
The Zonke iinjongo zoCoceko Usebenzisa i-enzyme yendalo kunye yendalo ukukhupha ioyile yesitrasi esiyimveliso enokusetyenziselwa izinto eziphilayo ngaphandle kwentsalela, iyasebenza ezimotweni, imeko yekhaya, enje ngesikhumba, ikhaphethi, umhombiso, umdaka, ilaphu kunye nemisebenzi yokubulala iintsholongwane, antibacterial kunye nokuzisa umoya omtsha. Indawo yokucoca imoto eyenzelwe ekhaya ye-OPS inokubola ngokulula iintlobo ezahlukeneyo zamabala anqabileyo, ngaphandle komonakalo kwizinto zezinto. Kuyinto yokucoca eco-friendly yokucoca!
♣ Kubizwa ngokuba ngumsila we-enzyme ye-orange.
♣ I-Advanced, i-biodegradable, ifom ye-clean process.
♣ Ila ngokukhawuleza kwi-satin engapheliyo.
♣ Khangela ngokukhawuleza nangokucoca iiplastiki zangaphakathi, i-vinyl, isikhumba, i-rubber, kunye nezikrini ze-LCD.
Imveliso yemvelo ukucoca imoto kunye nekhaya langaphakathi.
Eyona nto icocekileyo ingaphakathi kwimoto isebenza kakuhle kakhulu kunezinye izinto eziveliselwa injongo yakho kwisiqingatha sexabiso.
Ubunono bokuhlambulula kunye nokukhuseleka okunzulu kunye nokukhusela okusebenzayo kwaye kukhuselekile kuyo yonke indawo yangaphakathi, kuquka i-stereos,
Izikrini ze-LCD, iidashboard, iingcango, iingqungquthela zendawo, nokuba yintoni esetyenziswa ngokubanzi ekucoceni kwangaphakathi kwemoto, kodwa nakhona
yokucoca indlu. Into enhle kukuba, unako ukukhetha ulungelelaniso ukususela ekupheleni. Konke okufuneka uyenze kuyaphula
kwaye usule ngohlobo lwe-microfiber kwiphina i-shin emdaka. Ukusetyenziswa kusetyenziswe umfaki-sicelo we-wax ojikelezayo, kunye nemigudu encinane.
Izitshilo ezitsha zivuthayo kunye ne-sheen. Nguye Imveliso engcono kakhulu yokucoca imo yangaphakathi yemoto kwaye yendlu yokucoca
Indalo Yonke injongo yokucoca - ezona Mveliso zokucoca izindlu
Ukususela kwangoku ukuza kuthi uhlambele ezintini ezinenkani, kulula ukutshatyalaliswa!
I-enzyme ye-oco-evumayo ye-orenji yokukhupha ioyitrushi eyimveliso enokuphinda ibekho,
Ungathathi nakuphi na ukonakalisa impilo yakho!
1. Sula kwaye usule ukucoca ukucoca okulula kwaye kulula.
2. Ukungena ngokukhawuleza, kunciphisa ibala.
3. Ukukhutshwa kwe-citrus kukhuselekile kwaye kukhuselekile.
4. Ingcamango ihlambulukile kwaye ingenanto ephosakeleyo.
5. I-Multifunction kunye nenjongo emibini yesithuthi kunye nendawo yokuhlala.
6. Imveliso yokucoca imoto ye-premium, igqibelele engaphakathi kwemoto ezichaziweyo iimveliso.
Masithembeke, Akukho mntu ufuna ukukhwela emotweni ephosakeleyo. Kungakhathaliseki ukuba wenza ntoni,
ezo zivumba ezimbi zibonakala zivela ngaphandle. Sifuna wonke umntu kwiiplanethi emhlabeni ukuba agibele kwiimoto
ukuvumba okumangalisa, kunye ne-ops ye-orange enzyme detergent yiyona nto imveliso yokucoca i-interiors yemoto.
Sinika izinto ezintathu zokucoca ngaphakathi emotweni. I-500 gram powder, i-500ML yokucoca (uLwelo), i-5L yokususa isihlalo sebala.
Uyokuhambisa njani ukucoca kwezangaphakathi?
Jonga olu thelekiso lungentla, ucinga ukuba sisixhobo esicocekileyo sokucoca isihlalo?
I-OPS eyenzelwe ekhaya Yonke injongo yokucoca inokubaluleka kokusebenza!
Ndiyicoca njani into yangaphakathi?
Elinye isipuni (malunga negrama ye-6) kunye nokongeza i-500 ML yamanzi, ngokukhawuleza uyifake kwizinto zezinto uze uyisule!
Ngaba ujonge izinto zokucoca imoto zangaphakathi? Ndiyacela Qhagamshelana nathi!
I-Car Intambo yokuCoca iMveliso yeeNkcazo
Umzi, uMveliso weCandelo lokuCoca ngaphakathi (i-Orange Enzyme Detergent)
Price I-US $ 7.50 / 1 Bag (FOB Ningbo / Shanghai)
MOQ I-500kgs (i-1000 bags)
Umhla wokuzisa Kwiintsuku ze-152-20.
Nceda uqinisekise ukuba ungumntu ngokukhetha imoto.